कस्तो होला खेलाडीको तिहार ? - खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कस्तो होला खेलाडीको तिहार ?
- सुवास हुमागाईं, काठमाडौं
कार्तिक ४, २०७४-अघिल्लो वर्ष सबै नेपाली लक्ष्मी पूजामा व्यस्त हुँदा राष्ट्रिय फुटबल टोली भने विमानस्थलमा मलेसिया प्रस्थान गर्ने तयारीमा थियो । एएफसी सोलिडारिटी कपमा सहभागी हुन नेपाली टोली त्यसतर्फ लागेको थियो । चाडबाडको मुखैमा बिदेसिनुपर्दा खेलाडीको मुहारमा केही नैराश्यता प्रस्ट देखिन्थ्यो ।
टोली मलेसिया पुगेको भोलिपल्ट भाइटीका थियो । मलेसिया पुगेका ३२ सदस्यीय नेपाली टोलीको निधार खाली नहोस् भनेर टोलीका गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठकी दिदी विद्याले नेपाल जानुअघि योजना बनाइसकेकी रहिछन् । टोली नेपालमा छँदै उनले उपकप्तान विराज महर्जनको हातमा टीका सामग्रीसँगै कोसेली पनि मलेसिया नै पठाइन्, यो कुरा विशाललाई भने पत्तो थिएन । टीकाको दिन टोलीका सम्पूर्ण सदस्य नियमित कार्यतालिकाअनुसार ब्रेकफास्टमा सरिक हुन पुगे । त्यस समय विशालको टेबलमा कोसेलीको पोको राखिएको थियो । विशाल त्यो देखेर अन्योलमा परे । जब विराजले उनलाई दिदीले नेपालदेखि भाइटीकाको कोसेली पठाएको खुलासा गरे, विशाल भावुक भए ।
यसपटक विशाल नेपालमै छन् र दिदी विद्या सपरिवार तिहार मनाउने सुरमा छन् ।
तेक्वान्दोकी दिग्गज संगीना वैद्य पनि तिहारको पर्खाइमा छिन् । अन्य चाडभन्दा संगीनालाई तिहारको व्यग्र प्रतीक्षा रहने गर्छ । संगीनाको परिवारमा एक भाइ र उनीसमेत सात दिदी–बहिनी छन् । भाइटीका उनको परिवारमा यस्तो अवसर हो जहाँ परिवारका सबै एकै स्थानमा भेला हुन्छन् ।
सक्रिय खेल जीवनका क्रममा उनले कतिपटक तिहार मनाउनै पाइनन् । ‘खेलाडी भएको बेलामा विदेशमा खेल्न जाँदा तिहार मनाउन नपाउँदा निकै नरमाइलो लाग्थ्यो । तर अहिले सबै सँगै रहेर तिहार मनाउँछौं,’ उनले भनिन् । खेल जीवनबाट संन्यास लिए पनि संगीना हाल तेक्वान्दो प्रशिक्षकका छिन् ।
गत वर्ष रियो ओलम्पिकमा उनी तेक्वान्दो खेलाडी निशा रावलकी प्रशिक्षक थिइन् । दिदी–बहिनीमध्येकी पाँचौं उनले भाइलाई के कोसेली दिने भन्ने अझै टुंगो लगाएकी छैनन् ।त्रिशूलीमा घर भएर विगतमा त्यहाँ टीका लगाउने गरेको उनको परिवार अहिले काठमाडौंमा छ । यसपटक काठमाडौंमा तिहार मनाउने उनले उपत्यकाका विभिन्न मठ–मन्दिर जाने बताइन् । ’सबै सँगै हुने कारण यतै नजिक घुम्न जाने योजना छ । यसरी आफ्नो मान्छेसँगै रमाइलो गर्दा जतिको मजा सायदै अरू होला । परिवारमा सबै एकै ठाउँमा जम्मा हुँदा छुट्टै उल्लास हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
किन बढ्छ जाडोमा ब्लडप्रेसर ? ›